यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर मनोज ज्ञवालीका १५ प्रश्न - Aarthiknews
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर मनोज ज्ञवालीका १५ प्रश्न
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडमा नायव महाप्रबन्धकको पदमा रही काम गर्दै आएका बैंकर मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्नहरू उल्लेख गरेका छन् । बुधबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् उनले १५ वटा प्रश्नहरू उल्लेख गरेका हुन् ।
यस्ता छन् उनका १५ प्रश्न
1.देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या 261,632 छ। यस वाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनी छन। देश भरमा हाराहारी9लाख 23 हजार प्रतिष्ठान हरु दर्ता छन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा 140 हो। यो कुल कम्पनीहरूको 0.05% मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको 0.015% मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या 14, 247 मात्र छ। केहि बैंकहरु 'डराएर' दर्ता नी भैसकेका छन- कानून मान्दैनौ भन्न नी मिल्दैन। असंगठित र नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ त्यहां दायरा बढाउन नसक्ने। जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यहि क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ?
11. सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा 34 मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ। यस सम्बन्धमा प्रष्ट ब्यबस्था हुनु पर्छ कि पर्दैन?
12. कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले 18 वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार 15 वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने 33 वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप 27 वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन 1 भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानिय भन्न सकिन्छ त?
14. रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठांउ SSF हुनुपर्ने मा कुनै हालतमा SSF मा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहां गुहार गर्नुपर्ने स्थीती किन सृजना भएको छ?
15. सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सहि हो। कैयौ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनी अशक्त हुदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने। घरको कमाई गर्ने मुल मान्छेको मृत्यु हुदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने। कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उधेश्यको बिचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउदै लाने लक्ष्य पनी राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ। यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउंदा यसबाट कमाउने उधेश्य राखेर कार्यविधि बनाउदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उधेश्यले अघि बढ्न हुदैन। सामाजिक सुरक्षा भनेर यो बर्ष मात्रै रु. 1 खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकको योगदान भन्दा प्रतिफल बढि र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनी पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन नी। हैन र ?